यी ३ राशि भएका महिलाहरुसँग जहिले पनि रहनुस् सावधान ! – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / यी ३ राशि भएका महिलाहरुसँग जहिले पनि रहनुस् सावधान !
यी ३ राशि भएका महिलाहरुसँग जहिले पनि रहनुस् सावधान !
admin August 10, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 138 Views
ज्योतिष शास्त्रमा हरेक राशीका व्यक्तिहरुको स्वभावको बारेमा वर्णन गरिएको छ। शास्त्रमा यी व्यक्तिहरुको गुण ,स्वभाव र दोषको बारेमा स्पष्ट जानकारी गरिएको छ। शास्त्रका अनुसार केही महिलाहरु शंकालु स्वभावका हुने गर्छन। उनीहरुको बढी चियोचर्चो वा शंका गर्ने बानीले अन्य व्यक्तिहरुलाई दिक्क बनाउने गर्छ। केही महिलाहरु आफ्ना पतिहरु प्रति अविश्वास राख्दै उनीहरुको निजि मामला समेत निगरानी राख्ने गर्छन। आफ्ना महिला साथी वा पत्नीको यस्तो व्यबहार पुरुषहरुको जीवनमा तनाबग्रस्त स्थिति आउने प्रबल सम्भावना हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मेष,वृष र धनु राशी हुने महिलाहरुमा यस्तो स्वभाव रहने गर्छ।
मेष राशि : मेष राशिका महिलाहरु धेरै भावुक र उत्प्रेरित स्वभावका हुन्छन। यी महिलाहरुमा बढी शंका गर्ने बानी रहन्छ। यिनीहरु समय र आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म आफ्ना जीवनसाथीको समेत हरेक कुराको निगरनी बढाऊने गर्छन। उनीहरु आफ्नो पतिको मोबाइल ,पर्स ,ब्याग आदी जाँच गर्न समेत पछि पर्दैनन्। उनीहरु आफ्ना श्रीमानले अन्य व्यक्तिसंग गरेको कुराकानी सुन्न रुचाउने वा हरेक क्रियाकलाप ध्यान दिने गर्छन। महिला साथी वा पत्नीको यस्तो व्यबहारले पुरुषहरु दिक्क मान्ने वा तनाब लिने गर्छन।
वृष राशि: यस राशीका महिलाहरु आफ्ना साथी वा पति बाट धेरै नै विश्वसनीय मानिने गरिएको भनेपनि उनीहरु भने पति वा साथी प्रति बढी शंकालु हुने गर्छन। धेरै उत्सुक स्वभावका यी महिलाहरु आफ्नो जिज्ञासा पूरा गर्नका निम्ति आफ्नो साथी वा पतिको फोन ,म्यासेज ,मेल, फेसबुक आदी जाँच गरेर पुरुषहरुलाई दिक्क बनाउने काम गर्छन। उनीहरु आफ्नो पतिले प्रयोग गर्ने सोशीएल मिडियासंग संबन्धित सबै कुराहरुको निगरानी राख्ने गर्छन।
धनु राशि : धनु राशीको महिलाको स्वभाव बढी शंकालु हुने भएकाले उनीहरुबाट केही हदसम्म टाढा रहन आवश्यक हुन्छ। उनीहरु आफ्ना साथी वा पतिको हरेक कार्यहरुमा ध्यान राख्दै निगरानी बढाऊने गर्छ जसकारण पति पत्नी बीच ठूलो झगडा समेत निम्तिन सक्छ। यिनीहरु पनि आफ्नो साथी वा पतिको मोबाईल ,पर्स आदी जाँच गर्न पछि पर्दैनन्। यस्ता कारणहरुले गर्दा उनीहरुको पुरुषको जीवन तनाबग्रस्त बन्ने गर्छ।
Previous उपत्यकामा बिहीबारबाट राति ८ बजेपछि सवारीसाधन चलाउन नपाइने
Next अनलाईनमा सुन्दर देखेर ४ हजारमा एक महिलाले लुगा अर्डर गरिन्, घर ल्याइदियो मेक्सी